Akụkọ - Ntụnyere n'etiti ịgbawa agbawa na pickling
Tụnyere n'etiti ịgbawa agbawa na pickling
Jiri moto na-akwọ ụgbọala impeller ka ọ tụgharịa (kpọmkwem ma ọ bụ V-belt chụpụrụ), na tufuo abrasives na dayameta nke 0.2 ~ 3.0 (gụnyere 0.2 ~ 3.0). nkedo ígwè ogbugba, ígwè waya ịkpụ ogbugba, igwe anaghị agba nchara na ụdị ndị ọzọ dị iche iche) na elu nke workpiece site n'omume nke centrifugal ike. Oxide ọnụ ọgụgụ, nchara na ndị ọzọ ígwè oxides (Fe3O4, Fe2O3, FeO, wdg) na-emeghachi omume na acid ngwọta na-etolite salts, nke na-etisasịwo na acid ngwọta na-ewepụ. The workpiece (ígwè ma ọ bụ aluminom ma ọ bụ zinc) na-emikpu na phosphating ngwọta (ụfọdụ acid phosphate dabeere ngwọta) na-edebe n'elu na-etolite a crystalline phosphate mgbanwe film insoluble na mmiri.
gburugburu enyi na enyi Mmetọ gburugburu ebe obibi Mmetọ gburugburu ebe obibi
Usoro dị mfe, akpaka na mechanized, na oge a na-edozi maka 3 ~ 15 nkeji dị ka ogo nke corrosion. Dabere na nha akụrụngwa etinyere na acid siri ike, enwere oke Banye workpiece na ngwọta phosphating wee ghọta phosphating site na mmeghachi omume kemịkal, nke na-ewe ogologo oge.
Wepụ nchara dị arọ, ọnụ ọgụgụ, akụkụ dị nkọ na ọnụ, deburr na flash, gbanwee ọnọdụ nrụgide nrụgide elu ka ọ bụrụ ọnọdụ nrụgide nrụgide (nke a dị ezigbo mkpa: nrụgide nrụgide na-emerụ ahụ - ọ na-abawanye ohere nke cracking workpiece na accelerates elu corrosion; compressive stress). bụ n'ụzọ megidere, ọ nwere ike melite ike nke akụkụ elu), wdg Usoro pickling na-ewepụ oke oxide dị n'elu igwe anaghị agba nchara, na-enwe okpomọkụ ọrụ dị elu na ogologo oge pickling, na-ebute ọnụ ahịa nhazi dị elu; The nkịtị okpomọkụ ọnụ ọgụgụ mwepụ usoro nwere ezi mmetụta na iwepu mkpa ọnụ ọgụgụ, ma ọ bụghị ezigbo maka oké ọnụ ọgụgụ, karịsịa black slag na ịgbado ọkụ nkwonkwo enweghị ike wepụrụ. Phosphating tupu mkpuchi nwere ike welie adhesion n'etiti mkpuchi ihe nkiri (dị ka mkpuchi) na workpiece; Na-abụghị mkpuchi phosphating nwere ike melite eyi iguzogide nke workpiece na-eme ka workpiece lubricated na machining usoro.
Mmetụta na elu mgbe ọgwụgwọ gasịrị Ọ bara uru na electrophoresis na galvanizing Enweghị mmetụta Enweghị mmetụta na electrophoresis
Anyị Zibo TAA bụ onye na-eweta ọrụ zuru oke maka ọgwụgwọ elu. gụnyere na-agbawa abrasives nnyefe mgbasa ozi,igwe gbawara agbawa na ngwa,diamond egweri na ịcha ngwaọrụ wdg. Nabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ka ị kpọtụrụ anyị, ma ọ bụrụ na mmasị ọ bụla ma ọ bụ ihe achọrọ maka ọgwụgwọ elu
ngwaahịa na ọrụ!
Bee osisi nwere ntụ oyi
Oge nzipu: Nov-13-2021